I-Sunifiram (DM235) ipowder (314728-85-3) hplc =98% | AASraw Nootropics
/ iimveliso / I-Nootropics powder / Sunifiram (DM235) ipowder
SKU: 314728-85-3. Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw inokubaniswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Sunifiram (DM235) ipowder (314728-85-3), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Sunifiram (DM235) ividiyo ye powder
I-Sunifiram (i-DM235) i-powder basebenzi
igama: I-Sunifiram (DM235) ipowder
I-molecular Formula: C15H13F2NO2S
Isisindo somzimba: 309.33
Isitoreji sokugcina: Gcina kwiqondo lokushisa okanye upholile
umbala: Umpu omhlophe okanye omhlophe
I-Sunifiram (DM235) ipowder ekuphuculeni ukusetyenziswa kwengqondo
I-powder Sunifiram, i-DM235 powder inegama lebhizinisi njengeBisfluoroModafinil, i-Flmodafinil.
Ukusebenzisa i-DM235 powder
I-DM235 powder iyinveli, i-nootropic enamandla kakhulu kunye ne-AMPAkine-njengekhampani eneempembelelo zokuphucula iziphumo kwizilwanyana zezilwanyana.
I powifiram powder yi-piperazine enezinto ezinxulumene nesakhiwo kunye ne-piracetam. I-Piracetam yenzelwe ukuphazamiseka kwe-neurodeergenerative njenge-Alzheimer's disease, kunye ne-Sunifiram powder yaziwa ngokunyusa ukusebenza kwengqondo kwezinye izilingo zokuziphatha. Xa receptor izifundo ezibophelelayo, Sunifiram umgubo ekrwada alubonisi noFaro kuninzi receptors neurotransmitter okanye imijelo (akukho noFaro kwi 1μM ngenxa serotoninergic, dopaminergic, muscarinic, nicotinic, adrenergic, glutamatergic, histaminergic, opioid, okanye receptors GABAergic), kodwa ukhuthaza ukukhululwa i-acetylcholine kwi-corerex ye-cerebral cortex, mhlawumbi ngokumodululisa okulungileyo kwempendulo ye-AMPA.
I-Sunifiram powder ivimbela i-amnesia eyenziwa yi-scopolamine, emva kolawulo lwe-ip kunye ne-po, ukuhlolwa kwe-mouse kunye nokusetyenziswa okuncinci kwe-0.01 mg / kg. I-effect ye-antiamnesic ye-Sunifiram powder ifaniswa nento eyenziwa ngamachiza e-nootropic awaziwayo njengepiracetam (30 mg / kg ip), i-aniracetam (i-100 mg / kg po) kunye ne-rolipram (i-30 mg / kg po), kodwa ngo-1,000-10,000 amaxesha angaphezulu.
Isilumkiso kwimiphumo emibi ye-DM235
I-Sunifiram powder (i-DM-235) yinkompazine eyenziwa yikhemikhali yocwaningo eneempembelelo ezichasene ne-amnesiac kwizifundo zezilwanyana ezinamandla ngaphezu kwepiracetam. I-sunifiram powder eluhlaza yindlela yokwenza i-unifiram elula. Ngokusekelwe kwizifundo ze-vitro nezilwanyana, kubonakala ukuba i-Sunifiram powder isebenza nge-activation AMPA-receptor.
I-sunifiram powder eluhlaza isebenza ngokusebenzisa ii-receptors ze-AMPA; oko kukuthi, i-receptors enoxanduva lokuhanjiswa kwe-synaptic ukudluliselwa kwinkqubo yesantya ephakathi. I-mechanics yayo iphinda ikhulise i-phosphorylation ye-AMPAR kunye ne-NMDAR ngeprotheyini kinase esebenzayo, eyona nto inokuphucula ubuchule besikhathi eside-oko kukuthi, ukuphucula ukuhanjiswa kwegama phakathi kwee-neurons ezimbini ezibangelwa ukukhuthazwa kwangoku.
Ukusebenza kwe-kinase echaphazelekayo yi-Sunifiram powder iphinda iphuculise iziphene zengqondo. Ukongezelela, Sunifiram umgubo ekrwada osebenza neuron yezifundo test yezilwanyana ngokuthi ukuncedisa kokukhutshwa acetylcholine, imolekyuli eziphilayo elisebenza neurotransmitter kwi ezininzi eziphilayo ezahlukeneyo. Ezi ndlela zisebenzayo zivumela i-Sunifiram powder ukuba isebenzise iipropati ze-anti-amnesiac.
I-Sunifiram powder nayo inokukwazi ukukhusela i-amnesia eyenziwe yi-nicotinic antagonist mecamylamine, i-GABAB agonist baclofen, i-α2 i-agonist clonidine kunye ne-AMPA ye-receptor antagonist i-NBQX kwi-test ye-avoid-avoidance test.
Kwi-rat Morris test test maze, ukulawulwa kwe-scopolamine kukuvimbela ukunciphisa ukuphunyuka kwexesha lokuphunyuka kokubili kokufumana nokugcina ukuhlolwa kokuhlolwa. I-Sunifiram powder eluhlaza, i-20 min phambi kokuqeqeshwa kokufunyanwa kwansuku zonke, inokukwazi ukukhusela ukukhubazeka kweememori kwi-0.1 mg / kg ip
Sunifiram powder uvelisa antiamnesic nyanga ezinintsi kunye neziphumo procognitive ngaphandle kokulungiswa ebonakalayo ukuziphatha ezinzulu yeempuku okanye iimpuku, yaye 0.1 mg / kg IP, Sunifiram powder kunciphisa ixesha ngomlingo kubefundisi pentobarbital kwi mpuku ngaphandle ekulungiseni ixesha kuFacebook ngomlingo. Ngaphezu koko, iigundane eziphathwe nge-Sunifiram powder eluhlaza zigcina ukulungelelaniswa kwemoto kwi-test ye-rotarod. I-motility ye-mouse ye-characterx, kunye nokuziphatha okuhlolisayo, ukuvavanywa ngolu vavanyo lwebhodi-bhokisi, kuhlala kuqhelekileyo emva kokulawulwa kwe-powder Sunifiram.
I-sunifiram ipowder eluhlaza ihambisa i-cholinergic transmission kwi-cortex ye-rite ye-rats. Njengoko kuboniswa ukuhlolwa kwe-microdialysis, i-Sunifiram powder iyakwazi ukwandisa ukukhululwa kwe-ACh kwi dose ye-0.01 mg / kg, enefuthe eliphezulu kune-Unifiram.
Ukubonakaliswa kweetayili ze-hippocampal kwi-100 μM i-NMDA ikhuthaza ukwanda kwe [3H] NE (48). Impembelelo ye-NMDA ikhuselwe kakhulu yi-100 μM kynurenic acid (KYNA). Ukongezwa kwee-nanomolar i-Sunifiram powder eluhlaza iguqula kakhulu i-KYNA. Umphumo we-Sunifiram powder uxhomekeke kwiinkxalabo (EC50 0.1 μM) kwaye phantse igcwaliswe kwi-1 μM.
Ukubandakanyeka kwama-receptor ye-AMPA kungahlolwa ngokusetyenziswa kwe-AMB ye-AMPA ye-receptor antagonist. Xa isicelo kwi 5 μM, NBQX livimbela [3H] ukukhululwa NE kubefundisi AMPA (100 μM), kodwa hayi ukukhululwa eziFihliweyo 100 μM NMDA-mediated ukusuka ibuzi izilayi hippocampal (48). NBQX, isebenze ngokwayo, antagonizes i Sunifiram Rwa umgubo Ukuguqulwa KYNA kwingcinezelo ukukhululwa eziFihliweyo NMDA-zavusa, nto leyo ebonisa ukubandakanyeka receptors AMPA kwi kwimiphumo Sunifiram powder.
Okubangel 'umdla kukuba, phantsi kweemeko carcinomas, Sunifiram unyango umgubo ekrwada landa PKCa (Ser-657) kunye nosapho src (Tyr-416) izinto kunye ezifanayo intsimbi-ezimilise yedosi-impendulo negophe njengokuba LTP, ayokufikelela kwi 10 NM. Ukwanda kwe-phosphorylation ye-PKCa (Ser-657) kunye ne-Src (iTyr-416) eyenziwe ngu-Sunifiram powder yayingavinjelwa unyango lwe-7-ClKN. Ukuphuculwa kwe-LTP yi-Sunifiram ipowder eluhlaza yayingavinjelwa kakhulu yi-PP2, i-inhibitor ye-Src.
Ekugqibeleni, xa kuthathwa ingxube ephezulu ye-glycine (300 lM), unyango lwe-Sunifiram lwee powder aluphumelelanga ukufumana i-LTP kwingingqi ye-CA1.
Ukuthatyathwa ndawonye, ​​ubungqina obungentla bungabonisa ukuba i-Sunifiram ipowder eluhlaza ivuselela indawo ye-NMDAR yokubopha i-glycine nge-activation PKCa esebenzisa iSrc kinase. Ukuphuculwa kwezinto ze-PKCa ezenza ukuba kubekho i-hippocampal LTP ngokusebenzisa i-activation ye-CaMKII.
I-Sunifiram (DM235) I-Powder eRaw
I-DM235 yePowder Marketing
Indlela yokuthenga i-DM235 powder: uthenge i-Sunifiram powder esuka kwi-AASraw
I-Sunifiram (i-DM235) Ukupheka kwamanqwanqwa okuKhulu:
Thenga i-Smart Drug Sunifiram powder online